Kutengesa Enablement Matipi | Martech Zone
Chishanu, February 15, 2013 Svondo, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Iko kushanduka kwekushambadzira uye yekutengesa maficha ari kuraira maitiro atinoita bhizinesi. Kunyanya, izvi zvinoreva kuti kutengesa kuri kusvika sei tarisiro nyowani nekuvhara chibvumirano. Kugonesa kwekutengesa kuri kushandira pamwe kwekutengesa nekutengesa uku uchigadzira mari. Kuona kuti zvirongwa izvi zvakabatana zvinoenderana nekubudirira kwekushambadzira nekutengesa.
Saiye mushambadzi, hongu ini ndinoona kushambadzira kwakakosha. Asi pakupera kwezuva (zvinoenderana nemamiriro ezvinhu), timu yekutengesa icharamba iine simba "rakanyanya" pane tarisiro nekuti kune kutaurirana kwakanangana uye kwega (kana vachinge vaita kuti ipfuure kushambadzira-kwakavakirwa kana ita zvakananga). Kuve nehurongwa hwehurongwa hwekuti ungaita sei tarisiro kubva pane yekutengesa maonero kuri kuwedzera kukosha kupfuura nakare kose. Nepo iyo yekutengesa inotenderera ingave yakareba sekushambadzira kutenderera, yega yega yekubata poindi inogona kuona kana iwe uri padyo nekugara pasi netarisiro kana kuti vapedza kutaura newe narinhi.
Kana iwe uchida kuona kuti iwe uri nhanho imwe padhuze nemusangano iwoyo, saka heano akati wandei e matipi ekugonesa ekugonesa:
Wana manzwiro etarisiro yako yehunhu mhando uye kudzidza maitiro. Vanhu vanodzidza uye vanogaya zvemukati nenzira dzakasiyana. Kunyanya, kune matatu marudzi ekudzidza: odhiyo, anoonekwa, uye kinesthetic.
Kana tarisiro yako ichiita kunge inodzidziswa neku "nzwa" zvaunotaura, ita shuwa yekuisa podcast, hukama hwehukama, kana mavhidhiyo mune chako chikumbiro. Aya ndiwo masvikiro emukati anoenderana nerudzi urwu rwekutarisira.
Kana tarisiro yako ichiita senge ichapindura zvakanyanya nemagirafu, machati, kana mifananidzo, saka une mudzidzi anoona pamaoko ako. Iyi ndiyo mhando inonyanya kuzivikanwa yemudzidzi. Mazhinji zvemukati zvemhando zvinokwezva kumudzidzi uyu - mavhidhiyo, infographics, ebook, whitepapers, mifananidzo, nezvimwe. Kana iwe uka "ratidza" tarisiro izvo zvauri, saka ivo vanokwanisa kunzwisisa nekuisa kukosha pane izvo zvauri kutaura.
Chekupedzisira, kune vanodzidza kinesthetic, vanodzidza nekuita. Izvi zvakati omei kubata kubva pane zvemukati zvekushambadzira maonero, asi zvinogona kuitwa. Ivo vanoda "sei" gwara kana zvemukati zvinovaudza "sei" ivo vanogona kubudirira. Whitepapers, ebook, mavhidhiyo, uye webinars ayo anotarisana nemaitiro ekuita chimwe chinhu chakanakira rudzi urwu rwekutarisira. Kuratidza hunyanzvi uye kupa ruzivo irworwo kwavari kwakakosha.
Ziva zvese zvingabvira nzira. Kazhinji, hapana mugadziri mumwe chete pane imwe kambani. Kufunga zvekudyara mune sevhisi kana chigadzirwa isarudzo yechikwata. Kunyange paine vamwe vanhu vane zvakawanda zvekutaura kupfuura vamwe, zvakakosha kukwidza kumapato mazhinji mukati mekuita sarudzo.
Ndiani chigadzirwa chako kana sevhisi iri kuzobatsirwa? Izvi zvinogona kusanganisira kushambadzira, kutengesa, mashandiro, uye maodhi (pasi mutsara). Wakaona here kuti chigadzirwa / sevhisi yako inobatsira sei imwe yeaya manas?
Tiri kuona kuwedzera kwemubvunzo kufona-ku-kuita. Panzvimbo pekuudza tarisiro yekuita chimwe chinhu, makambani ari kubvunza mibvunzo kukurudzira kudzvanya-pamasaiti avo. Vanhu vamwe nevamwe vanoita zvisarudzo zvichibva pane zvakavanakira - zvemukati zvakatenderedza "manas" zvinobatsira kunyengetedza danho rechikwata.
Our mutengesi wekutsvaga mutengesi, TinderBox, inopa mukana wekugadzira zvakapfuma midhiya zvirevo zvinokwezva kune ese marudzi emudzidzi, pamwe nekuziva kuti ndiani ari kuona chako chikumbiro. Aya metric anozopedzisira abatsira kuvhara chibvumirano uye kukudziridza profiling yevatengi. Kutengesa chikumbiro manejimendi ndiyo kiyi yekubudirira mukutengesa kwekugonesa. Kudzidza maitiro ekugadzira inoshanda yekutengesa chikumbiro kuchawedzera shanduko uye tinya kuburikidza.
Ndeapi mamwe matipi ekugonesa aunazvo? Ndezvipi zvimwe zvauri kuona muindastiri?
Tags: kutauriranaContent MarketingKufungidziraKugonesa Kugonesamatipi ekugonesa ekugonesa